I-China Uhlobo luni lokukhanya komthombo wokukhanya wephuzu le-LED? imboni nabakhiqizi | I-REIDZ
Uhlobo luni lokukhanya komthombo wokukhanya wephuzu le-LED?
Isikhundla samanje: Isibani sase-Austech> Isikhungo Sezindaba> Uhlobo luni lokukhanya okuvela kumthombo wokukhanya we-LED?
Umthombo wokukhanya we-point point ye-LED uluhlobo olusha lwesibani sokuhlobisa, okuyisengezo kumthombo wokukhanya nokhanyiso. Izibani ze-Smart ezingathatha indawo yokucaciswa okuthile kwesikrini sokubonisa ngechashaza nemiphumela yangaphandle ngokuxubana kombala we-pixel. Umthombo wokukhanya wephuzu le-LED ulungiselelwe njengomthombo wokukhanya kwezinhlayiyana. Umthombo wokukhanya wePhoyinti ngumqondo ngokomzimba ofikiwe, ukuze kube lula ukucwaningwa kwezinkinga zomzimba. Njengendiza ebushelelezi, iphuzu lesisindo, futhi akukho ukumelana komoya, kubhekiswa kumthombo wokukhanya osuka ngokufana ukusuka endaweni kuya endaweni ezungezile.
I-LED iyindlela yokuhambisa ukukhanya ekhanyayo. Isimiso sayo sokusebenza kanye nezimpawu ezithile zikagesi ziyefana ngama-diodeyristry ajwayelekile, kepha izinto zekristalu ezisetshenziswayo zihlukile. Ama-LED afaka izinhlobo ezahlukahlukene zokukhanya okubonakalayo, ukukhanya okungabonakali, i-laser, njll, nama-LED akhanyayo abonakalayo empilweni. Umbala okhipha ukukhanya kwama-diode akhipha ukukhanya kuncike ezintweni ezisetshenziswayo. Njengamanje, kunemibala eminingi efana nphuzi, luhlaza okotshani, obomvu, owolintshi, ohlaza okwesibhakabhaka, onsomi, umbala we-cyan, omhlophe, kanye nombala ogcwele, futhi kungenziwa ngezimo ezahlukahlukene ezinjengonxantathu nemibuthano. I-LED inezinzuzo zempilo ende, usayizi omncane nesisindo esikhanyayo, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi (ukonga amandla), izindleko eziphansi, njll., Namandla aphansi okusebenza, ukusebenza kahle okukhulu okukhanyayo, isikhathi esifushane kakhulu sokuphendula esikhanyayo, ibanga lokushisa elibanzi elisebenza, ukukhanya okumsulwa umbala, nesakhiwo esiqinile (ukumelana kweShock, ukumelana kwe-vibration), ukusebenza okuzinzile nokuthembekile nochungechunge lwezimpawu, kuthakazelelwa kakhulu ngabantu.
Umzimba okhanyayo we-LED useduze komthombo wokukhanya “iphuzu”, futhi ukwakheka kwesibani kulunge kakhudlwana. Kodwa-ke, uma isetshenziswa njengombukiso wendawo enkulu, ukusetshenziswa kwamanje nokusebenzisa amandla kukhulu. Ama-LED asetshenziselwa imishini yokubonisa efana namalambu enkomba, amashubhu edijithali, amaphaneli wokubonisa, kanye namadivayisi wokuhlanganisa wezinto zekhompiyutha, futhi asetshenziswa kakhulu ekuxhumaneni ngamehlo, njll., Kanye nomhlobiso wokukhishwa kwezakhiwo, amapaki okuzijabulisa, amabhodi, imigwaqo, izigaba nezinye izindawo.
Umthombo wokukhanya we-point point, isebenzisa i-LED eyodwa njengomthombo wokukhanya, futhi indlela ekhanyayo ilawulwa ngethala le-free-side side khipha i-lens, efinyelela ukusetshenziswa kwamandla amancane, uhla oluphezulu, ukulungiswa okuphansi, nempilo ende. Ngemuva kokuhlolwa kobuchwepheshe, ihlangabezana nezidingo zamazinga afanele ezobuchwepheshe. . Uhlobo olusha lwe-beacon light optical system olufana namalensi wefomu lokukhanya elikhipha amafomu wamahhala kanye ne-point ukukhanya komthombo we-LED yinto emisha yezobuchwepheshe ebonwa yidivayisi ekhanyayo.
Uma kuqhathaniswa nemithombo yokukhanya yendabuko, imithombo ekhanyayo ye-LED mincane ngosayizi futhi ilula ngesisindo. Zingenziwa kumadivaysi ebunji obahlukahlukene ukwenza lula ukuhlelwa nokuklanywa kwamalambu ahlukahlukene namathuluzi, kube nezimo eziqinile nobubanzi bohlelo. Ukusebenza kahle kwemvelo. Njengoba umthombo wokukhanya we-LED awudingi ukwengeza i-metal ze-zeal enqubweni yokukhiqiza, ngemuva kokuthi i-LED ilahliwe, ngeke kubangele ukungcoliswa kwe-zebury, futhi imfucuza yayo icishe isetshenziswe kabusha, engagcini nje ngokusindisa izinsiza, kodwa futhi ivikela nemvelo. Umthombo wokukhanya okuphephile futhi ozinzile we-LED ungaqhutshwa ngamandla wamandla aphansi ogesi, futhi amandla kagesi ajwayelekile aphakathi kwe-6 ~ 24V, ngakho-ke ukusebenza kokuphepha kulungile, ikakhulukazi kufanele ezindaweni zomphakathi. Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kwezimo ezingcono zangaphandle, Imithombo yokukhanya ye-LED inokukhanya okuncane kokukhanya nempilo ende kunemithombo yokukhanya yendabuko. Noma zivinjelwa njalo, impilo yazo yenkonzo ngeke ithinteke.
Isikhathi sokuthumela: Aug-04-2020